အိမ်သာတက်ခြင်းကတစ်ဆင့် ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်စေနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များဆို…. – သတင်းစုံ
အိမ်သာတက်ခြင်းကတစ်ဆင့် ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်စေနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များဆို….
blissful-burnell အွန်လိုင်းသတင်းများ 0
အခုအချိန်မှာ အကြောက်ရဆုံးကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်အရေး အခြားနိုင်ငံတွေက စီမံချက်တွေ၊ ဝင်ခွင့်ထွက်ခွင့်တွေ ကန့်သတ်ပြီး အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ သွေးအေးနေဆဲ နိုင်ငံတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
အချို့သော နိုင်ငံတွေမှာတော့ စစ်ဆေးရေနဲ့ပတ်သက်လို့ ခေတ်မီတဲ့ကိရိယာတွေ မရှိသေးပါဘူး။ အခု ပညာရှင်တွေကတော့ ရောဂါပိုးရှိသူ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ရေအိမ်ကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုရာမှလည်း ရောဂါ ကူးစက်စေနိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ရောဂါပိုးရှိသူရဲ့ မစင်မှာ ဒီဗိုင်းရပ်စ် ပါဝင်လာနိုင်ပြီး၊ အဲဒီအိမ်သာကို တစ်ခြားလူက သုံးမိတယ်ဆိုရင် ရောဂါကူးစက်စေနိုင်တာပါ။
လူမှလူတစ်ဆင့် ရောဂါကူးစက်မှုအပြင်၊ ရောဂါပိုးရှိနေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ကိုယ်တွယ်မိပါကလည်း မျက်လုံးကနေတစ်ဆင့် ရောဂါပိုးတွေ ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသတိထားရမှာက ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူဟာ ပြင်းထန်အဖျားရောဂါတွင်သာမက ဆိုးရွားတဲ့ ဝမ်းလျှောမှုကို ဖြစ်စေနိုင်တာ သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။
Chinese Academy of Science မှဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Wuhan Institute of Virology မှ ပညာရှင်များ၊ Renminbi Hospital of Wuhan University မှ ပညာရှင်များက ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့
ဗီဇဟာ လူရဲ့အစာခြေစနစ်ကိုပါ ပျံ့နှံ့သက်ရောက်နိုင်လို့ အိမ်သာသုံးတဲ့အခါမှာလည်း ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ တသီးတစ်ခြားသုံးဖို့ သတိပေးခဲ့တာပါ။
ဒီမတိုင်ခင်မှာ အမေရိကန် လူနာတစ်ဦးရဲ့ မစင်မှာ ရောဂါပိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ လက်တလောမှာ အများပြည်သူသုံး သန့်စင်ခန်းတွေ၊ လူအသုံးများတဲ့ သန့်စင်ခန်းတွေကို အထူးရှောင်ကြဉ်ဖို့ သတိထားရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
Chinese Academy of Science မှဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Wuhan Institute of Virology မှ ပညာရှင်များ၊
Renminbi Hospital of Wuhan University မှ ပညာရှင်များက ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ဗီဇဟာ လူရဲ့အစာခြေစနစ်ကိုပါ ပျံ့နှံ့သက်ရောက်နိုင်လို့ အိမ်သာသုံးတဲ့အခါမှာလည်း ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ တသီးတစ်ခြားသုံးဖို့ သတိပေးခဲ့တာပါ။
ပြဿနာတွေ စိတ်ညစ်စရာဒုက္ခတွေကြုံတွေ့လာတိုင်း ကုသိုလ်တစ်ခုခု အမြဲပြုပါ…